Inombolo yeFlat 1 Indaiatuba, indawo enkulu - I-Airbnb
Inombolo yeFlat 1 Indaiatuba, indawo enkulu
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Irena
Silusapho olunikezela ngeli gumbi libekwe ngaphakathi kweFlat Number One kanye kumbindi we-Indaiatuba. Indawo yethu inekhitshi, igumbi lokuhlala elinomabonakude, indawo yokuhlamba impahla, imicrowave kwaye ikwizinyuko nje ukusuka kudederhu lweevenkile eJaraguá. Inzuzo enkulu yokuhlala apha kukonwabela izibonelelo zeflethi yobuchwephesha ngokuhlawula ixabiso le-AirBNB.
Le yiFlethi egcweleyo yeflethi enye e-Indaiatuba. Ungazonwabela izinto eziluncedo zekhondom, ezifana nequla lokuqubha elingaphakathi nelishushu, ijacuzzi, isauna kunye nejimu, zonke simahla ukuba uzisebenzise kwaye simahla.
Phakathi kweenkonzo ezibandakanyiweyo kukho i-valet yokupaka i-valet kunye ne-cable TV, zombini ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo. Kodwa eyona nto ingcono kukuba nokhuseleko kunye nombutho wehotele.
Iindwendwe zethu zinokutya isidlo sakusasa (esihle kakhulu!) ehotele ukuba zifuna. Imali (i-R30/umntu ngosuku) ayiqukwanga kumlinganiselo kwaye ihlawulwa ngokwahlukeneyo kwindawo yolwamkelo.
Kwiflethi uya kufumana amashiti kunye neepillowcases. Ibhafu kunye neetawuli zobuso AZInikezelwa.
Iflethi AYINASO isitovu njengoko ingavumelekanga kuyo yonke iNombolo 1 condominium, kodwa sine-oven ye-microwave yokutya ngexesha lokuhlala kwakho.
I-mattress ubukhulu bendlovukazi, ayinakwahlulwa ibe ngamaqela amabini.
Le flethi ikumgama oziikhilomitha ezili-11 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iViracopos. Apha unenyani zonke izixhobo ezikufutshane njengoko kukwisitrato esithule kakhulu ecaleni kweCarrefour, Shopping Jaraguá, Ecological Park, McDonald's. Yonke into ngaphakathi kweebhloko ezimbalwa, ungahamba. Imall ikwibloko elandelayo! Kwaye siyaqinisekisa: indawo ithe cwaka.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga nesixeko, ndwendwela umkhokeli wethu wabakhenkethi apha kwintengiso ngokwayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Irena
Uninzi lwezihloko zinokuqwalaselwa ngokuthe ngqo kwindawo yolwamkelo ehotele. Kwiimeko ezikhethekileyo, sihlala ngaphakathi kwemizuzu eyi-15 yendawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jardim Dom Bosco